निर्वाचन आयाेगकाे ओलीलाई प्रश्न : पार्टी नै छैन, कहाँबाट चुनाव लड्नुहुन्छ ? – Himalipress
निर्वाचन आयाेगकाे ओलीलाई प्रश्न : पार्टी नै छैन, कहाँबाट चुनाव लड्नुहुन्छ ?
हिमाली प्रेस । ३० माघ २०७७, शुक्रबार १२:२१
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार निर्वाचन आयोगमा आयुक्तहरुसँग छलफल गरेका छन्। निर्वाचन आयोगमा प्रधानमन्त्री ओलीले निवार्चनको तयारीबारे जानकारी लिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनको तयारी निरन्तर अगाडि बढाउन आयोगसँग आग्रह गरेका प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
नेकपाको आधिकारिकताको विषयमा निर्वाचन आयोगले अहिले छानबिन गरिरहेको छ। अहिलेकै अवस्थामा प्रक्रिया अघि बढाउँदा ४५ दिनसम्म लाग्ने निर्वाचन आयोगकै पदाधिकारी बताउँछन्।
नेकपाको आधिकारिकताबारे टुंगो लगाउने जिम्मा आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई दिइएको छ। जबकि उनी आफैं विवादास्पद व्यक्ति हुन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् भंग गरेर वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन मिति निर्धारण गरेका छन्।
तर, उनकै पार्टीको कुन हो भन्ने खुल्न अझै डेढ महिना लाग्छ। तर, प्रधानमन्त्री ओलीदेखि उनका मन्त्री र निकटस्थ नेताले पनि वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ भन्न छाडेका छैनन्।
नेकपा आधिकारिकता विवाद तत्काल टुंगिने अवस्था नदेखिनु, राजनीतिक दलका आन्दोलन झन् झन् कडा बन्दै गएपछि सर्वोच्च अदालतमै वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ ? भनेर प्रश्न उठिसकेको छ।
३० माघ २०७७, शुक्रबार १२:२१
पर्सा : पर्सामा सशस्त्र प्रहरी र भारतीय बालुवा तस्करबीच झडप भएको छ। पर्साको ओरिया खोलाको बालुवा अवैध रुपमा उत्खनन गरिरहेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी र भारतीय बालुवा तस्करबीच झडप भएको पर्सा प्रहरीले जनाएकाे छ। पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिका वडा नम्बर १ पिपडाढीमा ओरिया खोलाको बालुवा उत्खनन गरिरहेको भारतीय ट्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा भएको झडपमा दुई जना […]
१६ जेष्ठ २०७८, आईतवार ११:४६
मदिरा, चुरोट, वाइन र हल्का पेय पदार्थमा यस वर्ष पनि बढ्यो कर
१६ जेष्ठ २०७८, आईतवार ११:१७
सुकेटार विमानस्थलाई रवीन्द्र अधिकारी विमानस्थल राखिने सरकारको घोषणाप्रति योगेश भट्टराईको आपत्ति
६ जेष्ठ २०७८, बिहीबार १६:२२
सरकारले संसदको नियमित अधिवेशन बोलाउने तयारी